चालु खातामा एकमहिनामै १३.३ अर्ब घाटा थपियो, शोधानान्तर घाटा पनि अत्यासलाग्दो
काठमाण्डौ । आयातमा भइरहेको निरन्तरको वृद्धिका कारण चालु खाता घाटा विस्तार भई रु.२०४ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले देशका प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरुको चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्मको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै चालु खाता घाटा बिस्तार हुँदै गएको बताएको हो । चालु खाता घाटा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रु.१७२ अर्ब ६७ करोडमा...
काठमाण्डौ । शुक्रबार राति रसुवाबाट काठमाण्डौका लागि छुटेको टाटा सुमोमा तस्करी हुँदै गरेको १५ किलो सुनसहित एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यसअघि गएको २२ गते बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ किलो सुनसहित एकजना पक्राउ परेका थिए । आखिर पछिल्लो समय यसरी सुन तस्करीमा एकाएक तीव्रता आउनु पछाडिको कारण के होला ? यी सबै पछाडि...
काठमाण्डौ । सरकारी कारोबार गर्ने सबै बैंकहरुलाई शुक्रबार(पुस २९) गते अपरान्ह ४ बजेसम्मै कार्यालय खोल्न नेपाल राष्ट्रबैंकले निर्देशन दिएको छ । बिहीबार एक निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षको पुस महिना आयकरतर्फको प्रथम किस्ताको रकम दाखिला गर्ने महिना भएको तथा पुस मसान्तको दिन शुक्रबार पर्न गएकोले पूरै दिन अर्थात...
काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक राष्टबैंकले तोकेको समय भन्दा निकै अघि नै ८ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउने पहिलो निजी बैंक बन्न सफल भएको छ । बैंकको संचालक समितिले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र २१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भनी गरेको घोषणा मंगलबार सम्पन्न ३० औं वार्षिक साधारणसभाबाट पारित...
दमौली । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले भूकम्प र नाकाबन्दीपछि तरल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको बताएका छन्। ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड दमौली शाखाको उद्घाटन गर्दै डा नेपालले व्यापार घाटा रु ३९३ अर्ब रहेको र ४२७ अर्बको विप्रेषण नेपालमा भित्रिने गरेको जानकारी गराए। मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत...
वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुलाई सुनौलो अवसर, २५ करोडको बचतपत्र निष्कासन गर्दै राष्ट्र बैँक
काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०७८ निष्कासन गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैँक, राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागले २५ करोड रुपैँयाको ५ वर्षे बचतपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । अर्धवार्षिक रुपमा व्याज भुक्तानी हुने र व्याजकरबाहेक ९ प्रतिशत व्याजदर रहने जानकारी गराउँदै राष्ट्र बैँकले इच्छुक वैदेशिक...
काठमाण्डौ । अमेरिकी डलरको भाउ ओरालो लाग्ने क्रम बिहीबार पनि जारी रह्यो । बुधबारको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ करिब एक रुपैयाँले कमजोर बनेको हो । नेपाल राष्ट्रबैंकले जारी गरेको विनिमय दर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरीद मूल्य १०७ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्री मूल्य १०८ रुपैयाँ ४७ पैसा छ । साताको पहिलो दिन आइतबार अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै...
काठमाण्डौ । सरकारले नेपाल राष्ट्रबैंकको डेपुटी गभर्नरमा चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । लामो रस्साकस्सी र हानाथापपछि करिब अढाई महिनादेखि सल्टिन नसकेको डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको बिषय बुधबार निश्कर्षमा पुगेको हो । बुधबारको क्याबिनेटले डेपुटी गभर्नरमा शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने...
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा, आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतमा खुम्चिँदा मुद्रास्फिति साढे ९ प्रतिशत पुग्ने
काठमाण्डौ । आफ्नै पूर्व प्रक्षेपणलाई संसोधन गर्दै नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मूल्यवृद्धि साढे ९ प्रतिशतसम्म पुग्ने नयाँ प्रक्षेपण गरेका छन् । आइतबार मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गर्दै गभर्नर नेपालले यस्तो प्रक्षेपण गरेका हुन् । भूकम्प र त्यसपछिको लामो नाकाबन्दीका कारण...
अख्तियारकै कर्मचारी कमिसनको खेलमा !
काठमाण्डौ । आफूले पाएको अख्तियारीको गलत प्रयोग भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई ठेगान लगाउने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । अरुलाई ठेगान लगाउने यो निकायकै कुनै अधिकारी वा कर्मचारीले चाहि आफूले पाएको अख्ति–यारीको दुरुपयोग गरे के होला ? अख्तियारकै कर्मचारीले अख्तियारीको दुरुपयोग गरे उसलाई कसले कारबाही गर्ला ? अख्तियारका केही...
काठमाण्डौ । पुस ९ गतेदेखि रिक्त रहेको नेपाल राष्ट्रबैंकको दुई डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको बिषयले अझै पनि निश्कर्ष पाउन सकेको छैन । यति लामो समय ती दुई पद रिक्त हुँदा पनि सरकारले किन डेपुटी गभर्नरमा कसैलाई नियुक्त गर्न नसकेको होला ? धेरैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असहमति र दुवै पदमा एमाले समर्थित कार्यकारी निर्देशकलाई ल्याउनुपर्ने...
सुनचाँदी निक्षेप योजना : भारतको यो मोडालिटी नेपाललाई पनि उपयुक्त हुनसक्ने
विकास बैंकहरुले पनि मागे सेयर ब्रोकरेज लाइसेन्स
भारतको एपोलो हस्पिटलमा एनआइसीका ग्राहकले १५% सम्म छुट पाउने